၎င်းအလိပ်ကို မေပယ်ရွက် အခြားတစ်ရွက်ထဲ ထည့်ပါတယ်
ထိုအရွက်ရဲ့ ထိပ်ဖျားကို လှန်ခေါက်လိုက်ပါတယ်
မေပယ် နောက်တစ်ရွက် ထပ်ယူပါတယ်။အလယ်က ခေါက်ထားပြီး ထပ်လိုက်ပါတယ်
ခေါက်ထားတဲ့ အဖျားစကို နောက်ဘက်သာသာလေးချိုး
ခုလို အဖူးငုံလေးတွေ များလာရင်
မေပယ်ရွက် အပြန့်လေးတွေကို အပြင်က လှလှပပ ထပ်ပြီး စည်းလိုက်ရင် ချစ်စရာ မေပယ်နှင်းဆီပန်းစည်းလေး ရပြီပေါ့နော်
အိုးကလေးမှာ အရွက်လေးတွေနဲ့ရောပြီး ထိုးထားလည်း လှပါတယ်။
ဒီလိုလည်းထိုးတယ်.. ဒါကတော့ ပွင့်နေတဲ့ နှင်းဆီနဲ့ တူတယ်
ချစ်စရာ ရွှေဝါရောင် မေပယ်နှင်းဆီ
ဒီလိုအရွက်ခြောက်လေးတွေနဲ့ ပန်းစည်းလေးပြုလုပ်ပြီး နံရံမှာချိတ်ဆွဲကာ ခရစ္စမတ်ကို ကြိုနိုင်ပါသေးတယ်
အချို့ကတော့ မေပယ်ရွက်တွေကို အခြားသော ပန်းတွေနဲ့ ပန်းအိုးလည်း ထိုးတတ်ကြပါသေးတယ်။
ဓာတ်ပုံများအားလုံး အင်တာနက်က ရှာဖွေထားတာပါ။ မေပယ်ရွက်ကနေ ပန်းပွင့်လေးတွေ လုပ်တာလည်း အင်တာနက်ကပါဘဲနော်. မေပယ်ရွက်လေးတွေကို လှလှပပလေး အသုံးချနိုင်ဖို့ မျှဝေပါတယ်နော်.
တစ်ဆက်တည်းမှာ ညီမရိုစ့်ရဲ့ ဒီဇင်ဘာပိတ်ရက်မှာ ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ တဂ်ပိုစ့်လေးထဲက မေးခွန်းတွေကို ဒီမှာဘဲ တစ်ခါတည်း ဖြေလိုက်ပါတယ်နော်။ သူမေးတဲ့ မေးခွန်းတွေကို အပြာရောင် ခြယ်ထားပါတယ်. ဖြေထားတဲ့ အဖြေအတွက် ရိုစ့်တစ်ယောက် ကျေနပ်ပေးပါလုိ့နော်။
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ခရစ်စမတ်ဆို ကျောင်းပိတ်တာရယ်. ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေ များတာရယ်ကြောင့် ထူးထူးခြားခြား စိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်မိပါတယ်. ခုချိန်မှာတော့ သိပ်မထူးခြားတော့ပါဘူး။
နှင်းတွေအေးခဲနေတဲ့နေရာကိုတော့ အလည်အပတ်သွားချင်ပါတယ်. ခရစ္စမတ်ဟာ နှင်းဖြူဖြူလေးတွေပါမှ ပိုပြည့်စုံတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။
ဒီမှာတော့ ပိတ်ရက်က မများတော့အိမ်မှာဘဲရှိမှာပါ။ ခရီးထွက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါ။
ခရစ္စမတ်ကဒ်လောက်ဘဲ ပေးဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
ငယ်တုန်းကတော့ ခရစ္စမတ်ဆို သိပ်ပျော်ခဲ့တယ်။ အမှတ်ရစရာတွေလည်း ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ နှင်းတွေကျတဲ့ Sweet December နဲ့ Christmas အကြိုညတွေမှာ ညလုံးပေါက် သီချင်းတွေလိုက်ဆိုတယ်။ သစ်တုံးတွေနဲ့ မီးဖိုထားတဲ့ မီးဖိုတွေ့ရင် အလုအယက် ဝင်ထိုင်နေရာဦးကြတယ်။ သူများတွေတိုက်တဲ့ ဆန်ပြုတ် ပူပူ ကော်ဖီပူပူတွေ သောက်ရတာ သိပ်ပျော်တယ်။
သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးနဲ့ရှိချင်တယ်. တစ်ညလုံး မုန့်တွေလုပ်စားပြီး နယူးရီယားရောက်ချိန်မှာ Happy New Year လို့ အသံကုန်အော်ရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်.
ရှိတယ်။ လုပ်လည်းလုပ်ခဲ့တယ်.။ အပေါ်မှာ ပြောသလိုဘဲ. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မုန့်စားပြီး နှစ်သစ်ကို ကြိုခဲ့တာ မကြာခနပေါ့။
မီးပုံကြီးအကြီးကြီးဘေးမှာ ဂစ်တာတီးသီချင်းဆိုရင်း မုန့်တွေစားရင်း နှစ်သစ်ကြိုတဲ့ညကို ကုန်ဆုံးချင်တယ်။ လည်ဖို့အစီအစဉ်က ဒီနှစ်သစ်မှာတော့ မဟုတ်ဘူး.. နှစ်သစ်ပြီး ရက်နည်းနည်းကြာတဲ့ မကြာခင်မှာ ရှိတယ်.
အဲဒီလိုတော့ နှစ်သစ်မှာ တကူးတက ဆုံးဖြတ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်တာမျိုးတော့ မရှိပါဘူး။
မကုန်စေချင်တာတော့ ထူးထူးခြားခြား မရှိပါဘူး.. နှစ်သစ်ရောက်တာကိုဘဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ကြိုချင်ပါတယ်။
ရှိပါတယ်. အဲဒီလို လုပ်ရတာကိုလည်း သဘောကျပါတယ်။
အလည်လာ စာဖတ်သူများ၊ ကျွန်မရဲ့ စာရေးဖော် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးလည်း မကြာခင်မှာ ကျရောက်တော့မဲ့ ခရစ္စမတ်မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်တောင်း လိုက်ပါတယ်နော်.
30 Responses to “မေပယ်နှင်းဆီပန်းကလေး”
မေဘယ်ရွက်ဟာ ချဉ်ပေါင်ရွက်နဲ့ တူတယ်ဆိုလို့ :D
မြန်မာပြည်မှာ မေပယ်ရွက်မရှိလည်း ချဉ်ပေါင်ရွက်နဲ့ စမ်းလုပ်လည်းရတာပဲလေ..နော..
မေပယ်ပင်လေးတွေ မေပယ်ရွက်လေးတွေ ကြည့်ရတာ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာ...
My memory went to rolling maple syrup in snow and haveakind of lollipop.I made it happily and had likeakid in Canada over2decades ago.Our maple leaves already gone and only brunches left here in Europe.I'll try next time.Thanks Chaw.
လှလိုက်တာ လှလိုက်တာ တခါလောက်များ အချစ်နဲ့မေပယ်ပင်အောက်များချိန်းတွေ့လိုက်ရရင်ကွား)
စောစောပိုင်းက ဒီနှင်းဆီပန်းလုပ်နည်းလေး တင်ပေးရင်လိုက်လုပ်ကြည့်မိအုန်းမယ်.. ခုတော့.. သစ်ပင်တွေမှာ ဘာအရွက်မှမချန်ဘဲ တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေအောင် ဆောင်းရဲ့အအေးက ရက်စက်လွန်းနေခဲ့ပြီ ...
မယ်ရီခရစ္စမတ်ပါ.. ချေား)
ဒီလိုမျိုး ပန်းစည်းလုပ်ထားတာ တခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး၊ လှတယ်..၊ ဒီပို့စ်မှာတော့ မေပယ်လ်တွေကို တဝကြီး ကြည့်လိုက်ရတယ်..။ ကျေးဇူးပါ မချောရေ..။
Merry Xmas and Happy New Year ပါမချော
ကျွန်မရဲ့ လက် မဟုတ်ပါရှင့် :P
အားလုံးအားလုံးလည်း Merry Christmas ပါနော်..
လှတယ်ချောရေ။ အဲဒီလို ရှုခင်းမျိုးဆန်ဆန်လေးတွေ
ပန်းအိုးထိုးဘို့ ပန်းလိုရင် ချောတင်ထားတဲ့နည်းသုံးမယ်။
သစ္စာပန်းခြောက်တော့ တီတင့်လုပ်တတ်တယ်း))
Merry X'mas and Happy New Year ပါနော်
ဒီဆိုဒ်ထဲရောက်ရင် နှစ်သက်ကျေနပ်မှုနဲ့ စိတ်ကူးသစ်တွေ ရတတ်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျို့။
အပင်နဲ့ နာမည် အခုမှ တွဲမိတော့တယ်။
မေပယ်ဟာ ဒီလောက်လှမှန်း ခုမှ သေချာသိတော့တယ်...။ ကျွန်တော်သိဖို့ လိုအပ်တဲ့ အချက်တော်တော်များများကိုလည်း ဒီလွင်ပြင်မှာ လာလာတွေ့တယ် :)
"Wishing youamerry Christmas andaHappy New Year! Ma Chaw!"
ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးနော်... မေပယ်ရွက်တွေကို နှင်းဆီပန်းပုံဖော်တာ။ ပုံထဲက လက်တွေက အစ်မချော လက်တော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ ဟိး)
မကျေနပ်ဘူး... မကျေနပ်ဘူး ခိခိး) များများ ရေးမပေးလို့။ ဖတ်ရတာ မ၀ဘူး။ စိတ်ကောက်တယ်။ ဒါပဲ။
merry X'mass and happy New year..
အနုပညာမြောက်သူရဲ့ လက်ထဲက အရာတွေ အနုပညာဆန်စွာ လှပကြတယ် ဆိုတာ ဒါမျိုးကို ခေါ်တာ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်မမ...လှတယ် ချစ်ဖို့လည်း ကောင်းတယ်...မမ:):)
ငယ်ကတည်းက ပြက္ခဒိန်က မေပယ်တွေကို သဘောကျခဲ့တာ ခုထိပါဘဲ။
ခုကိုယ်တုိုင်ကိုယ်ကျမြင်ရပြန်တော့လည်း ပုိုလုို့ နှစ်သက်မိနေတာပါဘဲ။ ပုံလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးပါချောရေ။
မေပယ်ရွက်လေးတွေ လှလိုက်တာ...ချောရယ်..။ ရှာရှာဖွေဖွေရေးထားလိုက်တာ။ မေပယ်နှင်းဆီလေးဆို ကိုယ်တိုင် လုပ်ကြည့်ချင် စိတ်တွေပါ ပေါက်လာရတယ်။ သဘာဝကနေ တကယ့်အလှတွေ ရှာဖွေဖန်တီးနိုင်တယ်နော်..။
ပုံလေးတွေ ကြည့်လိုက်ရတာ စိတ်ကိုလန်းဆန်းသွားတာပဲ....
ဒီအရွက်ကို မေပယ်ရွက်လို့ခေါ်မှန်း မချောပို့စ်လေး ဖတ်ပြီးမှသိတယ်။ ချဉ်ပေါင်ရွက်နဲ့တူမှန်းတော့သိတယ်။ မေပယ်နှင်းဆီပန်း ခေါက်နည်းလေးလည်း လေ့လာသွားပါတယ်။
မေပယ်ရွက်ဟာ သိပ်...ကို စွဲဆောင်မှု ရှိတာပဲနော်။ အရောင်လေးတွေကလည်း အမျိုးမျိုးပြောင်းလို့။ မြင်တော့မြင်ဖူးတယ်။ နံမည်မသိခဲ့ဘူး။
မေပယ်ပင်အောက်နားမှာ ပရီးမီးယားကော်ဖီလေးတစ်ခွက်နဲ့ အတွေးဖျာလေးတစ်ချပ်ပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး အရောင်အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲနေတတ်တဲ့ လူ့အကြောင်း၊ လောကအကြောင်း ပိုစ်တစ်ပုဒ်လောက်ရေးလိုက်ရရင်ဖြင့်...။
ချောလည်း Happy Chritmas ဖြစ်ပါစေနော့...။
မေပယ်ပင်အောက်လေးမှာ ကိုယ်တိုင်သွားကောက်ပြီး ပန်းလေးလုပ်ချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်။ မေပယ်ပင်အောက်မှာ ကော်ဖီလေးတခွက်နဲ့ဆိုပိုကောင်းပေ့ါ။ လိုက်ပို့ပေးပါမချော.ဒါပဲ။။။
ဒီအရွက်ကို မေပယ်ရွက်လို့ခေါ်မှန်း မချောပို့စ်လေး ဖတ်ပြီးမှသိတော့တယ် ...
မေပယ်ရွက်ကို မေပယ်ရွက်လို့ ခေါ်မှန်းခုမှ သိတာ..အိမ်မက်တို့ ဗဟုသုတ မရှိပုံများ..
ဂျပန်မှာ မိုမိဂျိ လို့ခေါ်တယ်ထင်တယ်နော် မချော..
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ခုပဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဖဘမှာ တင်ထားတဲ့ပုံတွေကြည့်နေတာ။
မေပယ်ပင်၊ မေပယ်ရွက်ကလေးတွေကိုကြည့်ရင် ဘာလို့မှန်းမသိဘူး ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖတ်နေရသလိုပဲ။
Ma Chaw.. It's really so beautitul.. Thank for this post..ama..
ဟုတ်တယ် မေပယ်ကို မြင်တိုင်း မြန်မာပြည်က ချဉ်ပေါင်ကို မြင်ယောင်ကာ စားချင်တယ်...:P မေပယ်တွေ အစိမ်းကနေ အဝါ၊ အဝါကနေ အနီပြောင်းတာ အရမ်းလှတယ်..မေပယ်ပန်းစည်းကတော့ ခုမြင်ဖူးသွားပြီ.
မိမိနေထိုင်နေတဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်
တံဆိပ် မေပယ်လ် ရွက်အကြောင်းကို စုံစုံလင်ဖေါ်ပြပေးတဲ့အတွက် အလွန်မတန်မှကျေးဖူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။